UMnyango uqinisekisa ukuthi basasebenza 'omazisi abadala' | News24
UMnyango uqinisekisa ukuthi basasebenza 'omazisi abadala'
Johannesburg – UMnyango wezaseKhaya uthi ungamanga umbhalo obonakale kuTwitter oveza ukuthi omazisi abadala abayibhuku sebephelelwa yisikhathi.
"UMnyango awukaze usenze isimemezelo esinjalo. Sithanda ukucacisa ukuthi umazisi oluhlaza usasebenza futhi uzoqhubeka kuze kube kuqinisekiswa ukuthi uhlelo olusha luyasebenza kuwona wonke amahhovisi ukuze abantu bakuleli bezokwazi ukufaka izicelo zomazisi abasha abaziwa ngama-smart ID," kusho okhulumela uMnyango uDavid Hlabane.
Lo mbhalo osenkundleni yezokuxhumana, obukeka sengathi yisimemezelo esisemthethweni soMnyango, uveza ukuthi labo mazisi abadala baphelelwa yisikhathi ngomhlaka-31 Mashi 2018, bese unxusa abantu ukuba babhalisele ama-smart ID.
UMnyango ucele abantu bakuleli ukuba baqhubeke nokubhalisela ama-smart ID kuwona wonke amahhovisi awo angu-180 asebenzisa uhlelo iLive Capture System.
UHlabane uthe uMnyango usebenzisana no-FNB, Standard Bank, Nedbank no-ABSA ukwakha uhlelo lapho abantu bezokwazi ukufaka izicelo zomazisi abasha ngaphandle kokuya emahhovisi abo.
Abantu bayacelwa ukuba bavakashele ne-website yoMnyango ethi www.dha.gov.za bacindezele u-eHomeAffairs ukuze bakwazi ukufaka izicelo.